ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုမှ ကွန်ပျူတာများ Virus ထိပြီးပြင်ရန်ရောက်လာပါသည်။ဖြစ်ပုံမှာ Flashy နှင့်ဆင်ပါသည်။ သို့သော် Flashy ထက်ပိုဆိုးပါသည်။
(၁) Folder option ကိုဖျောက်ပြစ်သည်
(၂) task manager ကိုဝင်လို့မရတော့
(၃) Regedit သုံးမရ
(၄) Savemode အထောက်အကူမဖြစ်
(၅) AVG update လည်းအလကားဖြစ်သွား
(၆) Anti Virus program များသုံးမရ။ memory ပေါ်အတင်မခံ
(၇) Floder အသစ်များပွားလာသည်။
(၈) တစ်ချို့ Folder များဖွင့်လျှင် Auto ပြန်ပိတ်ကုန်သည်
Anti virus software အတော်များများဖြင့် detact လုပ်ကြည့်ရာ အဆင်မပြေ။ မိမိရုံးမှ စက်တချို့ကူးစက်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် Kaspersky software install လုပ်ပြီး scan စစ်သည့်အခါမှ မောင်မင်းကြီးသား Virus မဟုတ် Worm များသာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ worm စွဲကပ်နေသော file များကို Kaspersky ဖြင့်စစ်ပြီး delete လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေသွားသည်။၂ရက်ခန့် ဦးဏှောက်အတော်ခြောက်သွားရပါကြောင်း။
(1) Virus information : Email-worm.win32.brontok.n
(2) Detect & clean Antivirus Software : Kaspersky
မှတ်ချက်။ Kaspersky မှာ အခြား Antivirus software များနှင့် အတူအလုပ်မလုပ်။
Posted by mr sann oo at 8:20 PM
kaspersky မတွေ့တဲ့ကောင်တွေကိုကျတော့ ဒီကောင်လေးကတွေ့တယ် Spybot Search & Destroy ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးသုံးနေတယ် :)
Aung Chan said...
ဆရာဆန်းဦး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီအကြောင်းရေးမလို့စဉ်းစားနေတာ။ ဆရာ့ဆီကစက်ယူသွားပြီးညပဲ တစ်လုံးထပ်ကြွသွားတယ်။ ကိုချမ်းမြစိုး ပြောသလိုပဲ ကိုယ်တိုင်တွယ်လိုက်တယ်။ ဆရာ့ကိုဒုက္ခလာမပေးတော့ပါဘူး။
The renowned replica watches brand is launching exceptional limited series timepieces to mark the start of the 2010 Vancouver Winter Olympic Games, which is just 100 days away. The swiss replica watches Seamaster Diver 300m “Vancouver 2010” Limited Edition will be released in two stainless steel case interpretations, measuring 41mm and 36.25 mm in diameter. The Seamaster Diver 300m “Vancouver 2010” Replica Bell Ross Watches possess all the key characteristics of timekeepers, created intentionally for pro-divers. The case-back of the fake watches is marked with the Vancouver 2010 Winter Olympic Games logo. fake watch exposes.
ကျွန်တော် အချိန်မှီ အမြန် တက် (Tag) ရခြင်း။
သင်္ကြန်ရေ၊ အယ်လ်ကိုဟော၊ အပျိုချောများနှင့် ကျွန်တော...
Myanmar Thingyan 1
Return back !!!